QUUDIN QUUDIN FOR DIGAAGGA: HALABUURKA FEED, SIDA LOO DIYAARIYO QUUDINTA GURIGA, SIDA LOO QUUDIYO SI AY U DIGAAGGA - BEERAHA DIGAAGA
Noocyada quudinta digaagga, sida loo kariyo, sida loo quudiyo
Quudinta isku dhafan ayaa loo isticmaalaa si joogto ah, ma aha oo kaliya in la sameeyo beeraha hilibka, laakiin sidoo kale ukunta, sidaas darteed waxaa jira noocyo kala duwan oo kala duwan oo isku dhafan. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameysid liis dhamaystiran oo ah digaagga beeraha waaweyn iyo kan yaryar. Marka xigta, waxaan ka hadli doonaa noocyada iyo isugeynta quudinta, ku saabsan heerka isticmaalka iyo qaybaha waaweyn, iyo sidoo kale diyaarinta quudinta.
Qodobo faa'iido leh ee quudinta digaagga
Quudinta isku dhafan ayaa loo isticmaalaa meel kasta oo loogu talagalay quudinta digaagga maadaama oo ay noo ogolaanayaan inaanan ka fekerin diyaarinta alaabooyin kala duwan, laakiin sidoo kale sababtoo ah waxay isku dheelitiraan, oo ay ku daraan dhammaan fitamiinada iyo maadooyinka macdanta lagama maarmaanka ah. Quudin dhamaystiran ee digaagga waxay ka kooban yihiin borotiinno, dufan iyo carbohydrates ku jira tirada ay u baahan yihiin shimbirta. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad kordhiso miisaanka kor u kaca, iyo sidoo kale hagaajinta tayada alaabta. Waxaa sidoo kale jira vitamiin iyo macdanta, kaas oo kuu ogolaanaya inaad haysato shimbirta noocaan ah cunnooyinka noocan oo kale ah iyadoo aan wax cabsi ah lahayn. Xilliga qaboobaha, cuntadani waa mid aan loo baahnayn. Isticmaalka quudinta waa in xataa xitaa qiyaasta daawada ugu yar, ay awood u leedahay in ay qanciso dhammaan baahida digaagga. Dhibaatada goobta xajinta ayaa sidoo kale lagu xalliyaa, maadaama aadan u baahnayn inaad ku keydiso dalagyada xididka, hadhuudh, silage iyo waxyaabo kala duwan, laakiin waa ku filan inaad iibsato calafka isku dhafan.
Ma taqaanaa? Sannadkii 80aad ee qarnigii ugu dambeeyay, shirkad Maraykan ah ayaa bixisay in ay isticmaasho miraayadaha digaagga ee lenses casaanka. Qalab noocan oo kale ah ayaa loo malaynayay inuu yareeyo gardarrada, sidoo kale si looga hortago xashiishadda shimbiraha, sida iftiinka guduudu uu saameeyo digaagga. Nasiib darro, digaagga, ka dib markii la isticmaalo ogaanshaha-sida, si deg deg ah u lumay araggooda, taas oo ah sababta ay u khasabtey in ay ka bixiyaan muraayadaha.
On suuqa beeraha waa noocyada kala duwan ee quudinta isku dhafan, kuwaas oo lagu sifeeyay ma aha oo kaliya noocyada digaaga, laakiin sidoo kale da'da iyo jihada. Kuwa soo socda ayaa ah kuwa ugu caansan.
Baro sida loo diyaariyo quudinta digaagga iyo shimbiraha qaangaarka leh gacmahaaga.
Tani waa mid naadir ah oo ah nuujinta, taas oo loogu talagalay broilers da'da 1-14 maalmood. Isku dariddu waa hodan ku jirta fitamiino, macdan, raad raac, bakteeriyo faa'iido leh.
vitamin iyo macdanta macdanta;
Qodobka kalooriga ee 100 g ee quudinta waa 300 kcal. 21% wadarta guud ee maskaxda waa borotiin.
Waa muhiim! Qeyb ka mid ah quudinta bilawga ah waxaa ka mid ah daawada loo yaqaan 'lasalocid sodium' ee qiyaasta daawada (si looga fogaado coccidiosis).
Halabadani waxaa loo adeegsadaa quudinta digaagduur oo ah 1 sano jir. Cunto quudin, oo la jilciyay fitamiino iyo macdano kala duwan, sidoo kale waxay leedahay qiime nafaqo oo sarreeya.
fitamiin iyo macdanta macdanta.
Qiimaha tamarta ee 100 g ee quudinta waa 269 kcal. 16% wadarta guud ee caanaha waa borotiin ceeriin ah.
Waxaa loo adeegsadaa quudinta quudinta da'da 1-8 usbuuc. PC-2 ayaa la kulmay dhammaan macdanta lagama maarmaanka ah iyo fiitamiinada, daawooyinka ayaa sidoo kale lagu daray qiyaasta daawada.
Qiimaha tamarta ee 100 g ee quudinta ayaa u dhigma 290 kcal. 18% miisaanka guud waa borotiin ceeriin ah.
Kala duwanaanshahan waxaa loo soo bandhigaa cuntada marka la eego PC-2, taas oo ah, laga bilaabo toddobaadkii 9aad. Cuntada waxaa lagu sameeyaa qaab la mid ah miro yar, sidaas darteed shimbirta si dhakhso ah ayuu u cunaa iyada oo aan wax dhibaato ah. Ku siinta cunnadani shimbirta waxay noqon kartaa ilaa 17 toddobaad ee nolosha oo dhan. Marka lagu daro fiitamiinada iyo macdanta, probiotics ayaa lagu daray feedhka, iyo sidoo kale walxaha hagaajiya dheef-shiidka cuntada.
Qiimaha tamarta - 260 kcal. 16% ka mid ah wadarta guud waa borotiin.
Muuqaal khaas ah ayaa quudiya PK-7
Waxaa loo isticmaalaa quudinta baqshiinka iyo digaagga digaagga oo ka gudbaya da'da 18-22 asbuuc. Aad bay u adagtahay in la helo kala duwanaanshahan, waxaa badanaa la soo saaraa oo keliya amarka, sidaa daraadeed suurtagal maaha in la soo koobo halbeegga.
Samee quudinta digaagga guriga, oo samee cuntada saxda ah.
Halabuurka ee quudinta for digaagga
Badiyaa badi quudinta shimbiraha ayaa ka kooban qaybaha soo socda:
Heerka isticmaalka ee quudinta digaagga iyo lakabyada
Heerarkan waa in loo yaqaanaa milkiilaha kasta, sababtoo ah shimbiraha xad-dhaafka ah ayaa keena cayilka, taasoo si xun u saameeysa wax soo saarka ukun iyo tayada hilibka.
1-3 toddobaad ee nolosha
Maalin digaag ah waxay u baahan tahay 10 ilaa 26 g oo cunto ah. Saddex asbuuc gudahood, qof walba wuxuu ku jiraa ilaa 400 g.
Qiimaha maalinlaha waa 31-51 g, guud ahaanna xilliga la cayimay, mid kasta oo digaag ah oo ku saabsan 1.3 kg oo isku darka ah.
Maalinta hal qof, 51-71 g ayaa loo baahan yahay, guud ahaan, illaa 3.5 kg oo feed ah ayaa la wada isticmaalaa inta lagu jiro mudadaas.
Inta lagu jiro xilliga muddada cayiman, isticmaalka maalintii waa 72-93 g, guud ahaanna xilligan xajmiga digaaga 2.2 kg.
Waxaannu korin karnaa digaagga, iyaga oo si habboon u quudiya, una daweeyo cudurrada aan faafin iyo kuwa faafa.
Qiyaasta celceliska maalinlaha waa 100-110 g. Wakhtiga oo dhan, qof waliba wuxuu cunaa 5.7 kg oo cunto ah.
Qiimaha ayaa kor u kacaya oo qiyaastii 110-120 g. Wadar ahaan, inta lagu jiro xilliga digaaga cuno 15 kg oo ah isku-darka cuntada.
Qiimaha waxaa lagu go'aaminayaa 120 g maalintii. Isticmaal qof kasta muddada - 17 kg. Ogsoonow in qiyaasta la soo sheegay ay ku habboon tahay quudinta loogu talagalay noloshooda gaarka ah (PC-2, PC-3). Haddii aad isticmaasho quudin guri, markaa waxaad u baahan tahay inaad sameysid heerarka adigoo tijaabinaya.
Sida loo sameeyo quudinta gacmahaaga
Tixgeli inaad guri ku quudiso. Waxaan soo bandhigi karnaa doorashooyinka ukunta iyo hilibka gaduudan.
Doorashadani waxay ku haboon tahay digaagga qaangaarka ah ee ukunta.
Noocyada iyo naxwaha:
hadhuudh - 0.5 kg;
qamadida - 150 g;
shaciir - 100 g;
Cunto karis - 100 g;
cuntada kalluunka ama hilibka iyo lafaha cuntada - 150 g;
khamiir - 50 g;
Cuntada cawska - 50 g;
digir - 40 g;
fitamiin-macdan macdan - 15 g;
Corn, sarreen iyo shaciir waa in la burburiyaa si ay u helaan jajab qurxan. Ka hor inta aanad karsaneyn tirooyinka waaweyn ee nuujinta, hubi inaad tijaabiso qaybta tijaabada. Digaagga waa in ay ku faraxsan yihiin inay cunaan, haddii kale waa inaad isticmaashaa wax ka kooban.
Video: sida loo sameeyo guriga
Kala duwanaansho, taas oo qaybta libaaxu ku dhacdo hadhuudh. Waxaa loo adeegsadaa quudinta digaagga qaangaarka.
hadhuudh la jajabiyey - 0.5 kg;
digriiga jarjaran - 0.1 kg;
caanaha la burburiyey - 0.15 kg;
Cuntada - 0.1 kg;
Cuntada kalluunka - 0.14 kg;
ku sii daa khamiir - 50 g;
digix - 15 g;
Saldhig noocan oo kale ah ayaa loo isticmaali karaa si loo abuuro isku qasan qoyan oo lagu daro dheecaan ama maraq.
Dhammaystirida dhismaha quudinta naasaha broiler ee digaagga. Looma isticmaalo quudinta ukunta.
burka hadhuudhka - 0.5 kg;
cake - 0.17 kg;
dhulka sarreenka - 0.12 kg;
hilibka iyo cuntada lafaha - 0.12 kg;
khamiirka calafka - 60 g;
Cuntada cawska - 12 g;
Waxyaabaha noocan oo kale ahi waxay leeyihiin qiimo firfircoon oo awood leh, sidaas darteed waxay kuu ogolaataa inaad hesho miisaan degdeg ah kaddib 30 maalmood oo nolol ah.
Video: quudiyaan gacmahooda
Sidee loo kordhiyaa naqshadda cuntada
Quudinta iyo dheefshiidka quudinta kuma xirna kaliya halbeegga, laakiin sidoo kale qaabka jireed, iyo sidoo kale diyaargarowga hordhaca ah, sidaa daraadeed waxa muhiim ah in aanad isku darin maaddooyinka muhiimka ah, laakiin sidoo kale si sax ah u codsan. Qufac isku dhafan ayaa leh jajab yar, maadaama ay fududahay in lagu geliyo boorsooyinka kala duwan. Jajabka wuxuu u dhigmaa da'da shimbiraha, iyo sidoo kale sifooyinka nafaqada shakhsi ahaaneed. Tusaale ahaan, qamriga ma qulqulayaan xaalad bur ah, tan iyo marka la xiro xuubka xajinta waxay u noqoneysaa barar dhegaysan, taas oo kaliya ma aha mid ku adag in uu ku riixo hunguriga, laakiin sidoo kale inuu dheefshiido. Qayb kasta oo ka mid ah quudinta xayawaanka waxay leedahay sifooyin isku mid ah, sidaa daraadeed, dheefshiidka ee halabuurka la mid ah, laakiin qayb jajab ah, way kala duwanaan kartaa. Waxaa sidoo kale jira siyaabo kale oo loo diyaariyo isugeyntooda quudinta, taas oo ku lug leh hagaajinta dhadhanka, iyo sidoo kale kordhinta helitaanka nafaqooyinka shakhsiyeed.
Diyaarinta quudinta nafleyda ayaa loo baahan yahay si loo hagaajiyo dhadhanka cuntada. Isla mar ahaantaana, kala-soocidda enzymatic ee carbohydrateska, kuwaas oo aan si toos ah u dheefshiidin jirka ee digaagga, waxaa lagu fuliyaa waxyaabaha la nuugi karo. Tababarkani wuxuu si weyn u kordhin karaa dheefshiidka nuujinta, iyada oo aan wax ka beddelin qeybinkiisa.
Midda ugu fudud waa habka tooska ah, kaas oo lagu sifeyn doono hoos. Qaado 20 g oo khamiir ah oo khamiir leh, ka dibna ku daadi qadar yar oo biyo ah. Kadibna ku shub 1.5 litir oo biyo diirran (+ 40-50 ° C) baaldi ama baaquli weyn oo ku dar khafiif ah. Ka dib markaa, ku shub 1 kg oo ah quudinta isku darka ah ee weelka, isku walaaq. Taangiga u wareeji meel diiran ilaa 7-9 saacadood, ka dib markii badeecadda ay diyaar u tahay in lagu quudiyo digaagga. Xasuusnow in caanaha ka dib raashinka aan la keydinin, sidaa daraad u kari digirada sida shimbirta ay cuni karto hal mar. Inta lagu jiro habka khamiirka, quudinta ayaa lagu buuxiyaa fitamiin B, qiimaha nafaqadu wuxuu kordho.
Waa muhiim! Beddelidda cuno kariyuhu ma cuno.
Waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo dhadhanka cuntada, sababtoo ah inta lagu guda jiro nidaamkan qayb ka mid ah istaarijida waxaa loo beddelaa sonkorta, taas oo ah natiijada ay isku daraan macaan. Kaliya qaybta hadhuudhka ah ee feedka ayaa qalalan, iyo sida loola jeedo, ma jiraan wax macquul ah in lagu dhajiyo quudin buuxda oo la socoto caanaha iyo hilibka iyo lafaha cuntada, haddii kale inta badan fiitamiinada iyo macdanta ayaa uumi gali doona heerkulka sare.
Baro wax cunto ah.
Dhismaha miraha waxaa lagu shubaa tuubada, ka dibna biyo karkaraya ayaa lagu shubay (+ 90-95 ° C). Wixii kalluun kasta oo isku dar ah hadhuudhku wuxuu qaataa 1.5-2 litir oo biyo ah. Ka dib marka la isku dhajiyo taangiga waa in la xiro oo loo diraa meel kulul ilaa 3-4 saacadood. Heerkulka gudaha haanta waa in aan hoos u dhicin +55 ° C, haddii kale habka anti-gabowga ayaa joojin doona. Si loo dedejiyo geeddi-socodka, waxaad ku dari kartaa 1-2 g of malt halkii kiilo oo isku dar ah.
Dhab ahaantii, geeddi-socodkan waxaa loo barbar dhigi karaa kaabash dhanaan. Cawska cawska ah ayaa la dhigaa godadka qashinka, ka dib marka bakteeriyada lactic acid loo qaado si ay u shaqeyso, taas oo abuuraysa jawi asiidh ah, ilaalinta cagaarka. Geedaha soo socda ayaa la geliyaa silo: alfalfa, cagaaran cagaaran, cagaarka, soybean, qaybo dabiiciga ah ee digirta. Khudaarta cagaaran ayaa sidoo kale laga yaabaa in lagu daro: baradhada iyo karootada. 1 kg of silage tayo sare leh ku jira 10-30 g of si fudud u dheefshiidka digestible, iyo sidoo kale ku saabsan 5% carotene. Waxa kale oo jira qayb weyn oo ah fitamiin C iyo asiidhyada kiimikada ah. Waxyaabaha noocan oo kale ah ma aha oo kaliya nafaqo, laakiin sidoo kale faa'iido leh. Waxay hagaajineysaa shaqada habka dheef-shiidka, waxayna sidoo kale ka hortagtaa horumarinta hababka goosefactive.
Hababka jirka iyo farsamada
Hababka farsamooyinka ee diyaarinta ma saameynayaan helitaanka walxaha cuntada, laakiin, waxay si aad ah u fududeeyeen una dedejinayaan geedi socodka dheef-shiidka, taas oo ah natiijada ay daaqada digaagu ku yar tahay tamarta yareynta hawsha quudinta. Sidaa daraadeed, qiimaha nafaqada ayaa kor u kaca iyadoo aan wax isbeddel ah ku sameynin heerka kiimikada.
Dheriga dhirta firileyda waxaa lagu daboolay weel dabiici ah, taas oo aan u oggolaaneynin in si dhaqso ah loo helo nafaqooyinka. Haddii hadhuudhku dhan yahay mid la quudiyo, ka dibna habka caloosha ee mindhicirka ayaa isticmaala tamar badan oo tamar si uu u burburiyo xuubka. Sababtan darteed waa in dhammaan macdanta la mariyo geedi socod ah, taas oo si weyn u hagaajineysa oo dardar gelinaysa nuugista nafaqada. Heerka jajabku wuxuu ku xiran yahay nooca gaarka ah ee hadhuudhka, iyo sidoo kale da'da shimbirta. Cuntada adag way sii yaraaneysaa jajabku waa inuu noqdaa mid si tartiib tartiib ah ugu filan.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaadan helin oo kaliya haboon, yar yar jajabyada aan ku dhejin karin weelka ama quudinta, laakiin sidoo kale qayb buuxda oo dhan nafaqooyinka oo isla markaa galaan jirka shimbirta. Xaaladda cunto karinta, digaagga ayaa fursad u leh inay doortaan waxa ay jecel yihiin, sidaas darteed wax kasta oo hodan ah ayaa ah ka hor faa'iido badan oo ah digaag feedho. Maadaama bacriminta la mariyo daaweynta kulaylka inta lagu jiro granulation, waxay noqoneysaa mid la gaari karo habka dheef-shiidka. Isla mar ahaantaana, qaar ka mid ah fitamiinada iyo raad raac waxtar leh ayaa lumaya.
Hawlgallada ugu fudud, oo aan weli saameynin dheefshiidka. Xaqiiqdu waxay tahay in digaaggu ay u isticmaalaan dhammaan qaybaha quudinta hal mar, markaa waa in si fiican loo isku qasan yahay, sidoo kale waxay leeyihiin jajab la mid ah. Haddii ay ka kooban tahay mid liidata, shakhsiyaadka qaarkood waxay heli doonaan qadar labajibaar ah, qaar kalena ma heli doonaan, kuwaas oo saameyn doona miisaanka koritaanka iyo wax soo saarka ukunta. Inta lagu jiro geedi socodka isku dhafan, biyaha ama serum waxaa lagu dari karaa "dhajinta" jajabka ganaaxa qaybaha waaweyn. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad kordhiso tayada quudinta ee gasho jidhka digaagga, mana sii joogi doono quudinta.
Ma taqaanaa? Waxaa jira noocyo digaag ah oo loo yaqaan "Araucana", oo qaada ukunta buluugga ah. Muuqaalkani wuxuu la xiriiraa retrovirus, kaas oo ku dhex jira DNA-da oo ku dhejiyaa qolof aan caadi ahayn. Isla mar ahaantaana, ukumadu kuma kala duwanaan dhadhanka alaabada kale ee noocyada kale.
Hawsha beeraleydu ma aha oo kaliya inay iibsato quudinta, taas oo u dhiganta da'da shimbir, laakiin sidoo kale si habboon u diyaargarow quudinta, haddii loo baahdo. Hababka kor lagu sharxay ayaa kuu oggolaanaya inaad kordhisid nuxurka qadarka ah ee nuujinta, yaraynta kharashka soo iibsiga.